Ganacsiga – Goobjoog News
Ka ganacsiga kalluunka iyo isticmaalkiisa magaallo aan lahayn Xeeb iyo Webi ayaa ah mid muujineysa ahmiyadda uu Soomaalida dhexdeeda ku leeyahay isticmaalka Kalluunka. Cadaado oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ah magaalo aan lahayn bad...
Maxamuud Xasan, wasiirkii hore ee ganacsiga dowladda Soomaaliya ayaa wareysi uu siiyey Goobjoog News, wuxuu kaga hadlay sida ugu habboon ee loo xallin karo tabashada ganacsatada gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay wasiir Xasan in aragti...
Maalintii Labaad waxaa xiran ganacsiga Suuqa weyn ee Bakaaraha, kadib markii ganacsto is uruursatay ay sheegeen iney ka gadoodsan yihiin canshuur dheeraad ah oo lagu soo rogay. Ganacstada yar yar ee Suuqa Bakaaraha ayaa maanta...
Ganacsatada Suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa ku adkeysanaya iney xirnaadaan xarumahooda ganacsiga, tan iyo inta wasaaradda maaliyadda wax ka bedalayso canshuurta lagu soo rogay. Arrintan ayaa timid kadib markii dowladda federaalka ay ganacsatada Banaadir ku...
Dab ayaa habeenkii xalay ahaa wuxuu ka kacay suuqa daryeel, degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho, kaasi oo khasaare hantiyeed geystay. Goob joogayaal ayaa u sheegay Goobjoog News, in dabkaan uu kacay xilli saq dhexe ah,...
Waxaa muddo 7 todobaad ah aanan shaqeynin dekadda weyn ee magaalada Muqdisho, ganacsatada gobolka Banaadir ayaa waxaa ay ka cabanayaan canshuur kordhis. Shir jaraa’id oo ganacsatadu maanta ku qabteen magaalada Muqdisho, waxaa ay ka hadleen...
Wasiirka Wasaarada xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Somaliland Xasan Maxamed Gaafaadhi oo maanta hortagay golaha guurtida, kana warbixiyay waxqabadkiisa ayaa sheegay in ay jiraan shirkado kalluumeysi oo jabiyay sharciyadii rukhsadda loo siiyay iyo qaabka kalluumeysi, iyaga...
Wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa sheegay in aysan fududeen hadda in dalka loo soo-dabaco lacag cusub, waxa uu tilmaamay in arrintani ay u baahantahay ku dhowaad 40 milyan illaa 50 milyan oo doolarka Maraykanka...
Horraantii 1940-kii ayey aheyd bilaabashada lacagta loo yaqaanno Shilinka, waxa uu ahaa magacyadii laga dhaxlay gumeystihii Ingiriiska ee ka talinayey geeska Africa. Gumestahya waxa uu ku guuleystay in la qaato magac bixintiisa, 1960-kii ayey aheyd...
Wasiirka ganacsiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa xarig ugu hanjabay cid kasta oo sheegata dhismaha hargaha iyo saamaha ee degmada Dharkeenley, magaalada Muqdisho. Maareeye ayaa sheegay in dowladaha horumaray ay uga...